Chii Chinoitika Parufu?
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Baoule Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bicol Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Douala Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Futuna (East) Ga Georgian Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Krio Kwanyama Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Malagasy Mapudungun Mauritian Creole Mbunda Mizo Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Nahuatl (Guerrero) Ndebele (Zimbabwe) Nengone Nias Niuean Norwegian Nzema Oromo Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Russian Rutoro Sarnami Serbian Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tahitian Thai Tigrinya Tongan Totonac Tsonga Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Wallisian Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Rufu kusiyana noupenyu. Rufu rwakafanana nehope huru. (Johani 11:11-14) Vakafa havagoni kunzwa, kuona, kutaura, kana kufunga chimwe chinhu. (Muparidzi 9:5, 10) Chitendero chenhema chinodzidzisa kuti vakafa vanoenda kunyika yemidzimu kuti vanogara namadzitateguru avo. Izvozvo handizvo zvinodzidziswa neBhaibheri.
Vakafa havagoni kutibatsira, uye havagoni kutikuvadza. Zvakajairika kuti vanhu vaite zvetsika nokupa zvibayiro zvavanotenda kuti zvichafadza vakafa. Izvi hazvifadzi Mwari nokuti zvakavakirwa pane imwe yenhema dzaSatani. Uyewo hazvifadzi vakafa, nokuti havana upenyu. Hatifaniri kutya kana kunamata vakafa. Tinofanira kunamata Mwari chete.—Mateu 4:10.
Vakafa vachararamazve. Jehovha achamutsira vakafa kuupenyu muparadhiso yapasi. Nguva iyoyo ichiri mberi. (Johani 5:28, 29; Mabasa 24:15) Jehovha anogona kumutsa vakafa kungofanana namamutsiro aungaita munhu akarara.—Mako 5:22, 23, 41, 42.
Pfungwa yokuti hatifi inhema dzakaparadzirwa naSatani Dhiyabhorosi. Satani namadhimoni ake vanoita kuti vanhu vafunge kuti midzimu yavakafa mipenyu uye kuti inokonzera zvirwere nezvimwe zvinetso. Satani anonyengedza vanhu, pane dzimwe nguva achishandisa kurota uye zviratidzo. Jehovha anopa mhosva vanoedza kutaura navakafa.—Dheuteronomio 18:10-12.